Quand un croyant pèche
Ny fahotako dia maniratsira an’Andriamanitra
Ny fahotako dia manaisotra ny fifaliana amin’ny fiombonana amin’ny Ray
Ny fahotako dia mampihataka ahy amin’ireo zanak’Andriamanitra hafa
Ny fahotako dia mahatonga ahy iharan’ny fifampifehezana ao amin’ny fiangonana
Ny fahotako dia manimba ny fijoroana ho vavolombelona ho an’ny Tompo Jesoa
Ny lalana iverenana
Maro ny mpino, na dia ireo tena mbola tanora aza, no mahalala tsara ity andinin-tSoratra Masina ity: “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy [Andriamanitra], ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” (1 Jaona 1. 9). Manohina ny fontsika tokoa io andininy io, satria mametraka eo anoloantsika ny famindràmpo azon’Andriamanitra arotsaka amintsika, amin’ny fanadiovany antsika noho ny “ran’i Jesoa Zanany” (1 Jaona 1. 7).
Lafiny tena zara raha heverina io. Aoka tsy hohadinoina fa niditra teto amin’izao tontolo izao ny ota, satria naleon’ny olona nihaino ny laingan’ny devoly toy izay ny fanambaràn’ny Andriamaniny sy Mpahary azy. Araka izany, ny olona, izay noarìna tahaka ny endrik’Andriamanitra, dia nino ampahibemaso —teo anatrehan’Andriamanitra, teo anatrehan’ny devoly, ny anjely ary ny voary manontolo— fa Andriamanitra dia tsy fahazavana na fitiavana. Nanoso-kevitra tokoa mantsy ny devoly hoe nandainga Andriamanitra ary tsy nitady izay hahasoa ny olona. Koa dia nahita ny mangidy ny olona, nanandrana ny atao hoe fahalalana ny tsara sy ny ratsy (Genesisy 3. 5), ary ninia nifidy ny ratsy. Araka izany izy dia naniratsira sy nanohintohina ny voninahitr’Ilay Andriamanitra Masina indrindra, Izy “Izay madio maso, ka tsy te hitsinjo ny ratsy” (Habakoka 1. 13). Ary fahotana iray ihany no nanaovany izany; io fahotana tokana io dia ampy nahavoaroaka ny mpivady voalohany, dia Adama sy Eva, avy tao amin’ny saha Edena, tsy ho eo anatrehan’Ilay Andriamanitra Mpahary.
Inona ankehitriny no azon’io olona efa naniratsira an’Andriamanitra io atao, mba hahazoany ny fanavotana noho ny fahotany, mba hahavoafafa izany? Isika rehetra dia tsy maintsy tonga amin’ilay fahatsapana mangidy, hoe tsy misy na inona na inona ao anatintsika ao, afaka hamafa ny fahotantsika, sy hoe isika dia tsy afaka hanolotra ho an’Andriamanitra zavatra azony ankasitrahina, na inona na inona. Ny Andriamanitsika dia afo mandevona, tsy toy ny andriamanitry ny jentilisa, izay miandry sakafo aterina eo amin’ny alitarany isan-kariva, mba tsy hirehetan’ny fahatezerany amin’izy ireo. Matetika nefa isika no mandray Azy ho toy izany; ka amin’izany isika dia vao mainka maniratsira Azy. Hamaivanintsika ny asa nataon’ny Tompo Jesoa raha tonga tetỳ an-tany Izy. Natao ota [Izy] hamonjy antsika, mba hahatonga antsika ho fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy (2 Korintiana 5. 21). Mba azontsika an-tsaina ve fa noho ny fahotana iray monja ataontsika —na dia amin’ny maha-mpino antsika aza— dia tsy maintsy nidina tetỳ an-tany ny Tompo Jesoa mba ho faty teo amin’ilay hazo mahatsiravina tao Golgota, toy ny voaozona, nafoin’Andriamanitra, notorotoroina, nokapohin’Andriamanitra sy nampahoriana? Natao ota ho ahy Izy, noho io fahotana tokana io! Raha tsapako ve izany, dia mbola ho azoko eritreretina ihany ny hoe hanota aloha aho, fa avy eo dia “hamafa izany” haingankaingana amina fialan-tsiny aloaky ny vavako, ka tsy hahatsiaro akory hoe zava-doza eo anoloan’Andriamanitra ny nataoko?
Talohan’ny nanoratany ilay andininy diso fantatra hoe: “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy [Andriamanitra], ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” (1 Jaona 1. 9), dia efa nilaza ny apostoly Jaona hoe: “Ny firaisanay dia amin’ny Ray sy amin’i Jesoa Kristy Zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay, mba ho tanteraka ny fifaliantsika” (1 Jaona 1. 3-4).
Zava-dehibe iray hafa koa dia ity: “Raha hoy isika: Manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin’ny maizina, dia mandainga isika, ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin’ny mazava isika, tahaka Azy eo amin’ny mazava, dia manana firaisana isika [Dikanteny DIEM: “dia misy fiombonana amintsika samy isika”]” (1 Jaona 1. 6-7).
Misy endrika maro, ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, ny fifampifehezana ampiharin’ny fiangonana mivory amin’ny Anaran’ny Tompo Jesoa. Izany dia miantomboka amina hetsika ataon’ny mpiandry, toy ny fanarenana rahalahy tsy niambina ka azo-na fahotana tsy nahy (jereo Galatiana 6. 1). Manaraka izany, dia tsy maintsy anarina ireo izay tsy mitoetra tsara (1 Tesaloniana 5. 14); ary atao koa, raha ilaina, ny fananarana ampahibemaso (1 Timoty 5. 20). Farany, raha toa tsy nahatafaverina ilay nanota ireo hetsika rehetra nataon’ny mpiandry, dia tsy maintsy avoaka eny ivelany toy ny mpanao ratsy izy, izany hoe toy ny olona mitondra tena tahaka izay “naka tanteraka ny endriky” ny fahotana ataony.
Inona no tanjona tsy maintsy ampiharan’ny fiangonana ny fifampifehezana? Voalohany, dia satria izy tsy maintsy mitandro ny fahamasinan’ny Tompo sy ny Latabany. Tsy azo atao ny miseho eo anatrehan’ny Tompo miaraka amina fahotana, ka handray anjara amin’ny famakiana ny mofo (jereo Malakia 1. 7; 1 Korintiana 10. 20-22; 1 Korintiana 11. 27-32). Na dia tany amin’ny Testamenta Taloha aza, ny biby izay hatao sorona dia tsy maintsy nadio sy tsy nisy kilema; izany dia manambara amintsika ny fahadiovana sy ny halavorarin’ny zavatra atolotsika an’Andriamanitra. “Koa aoka isika hanatitra ny fanati-piderana amin’ny alalany ho an’Andriamanitra mandrakariva, dia ny vokatry ny molotra izay manaiky ny Anarany” (Hebreo 13. 15). Ny 2 Timoty 2. 19 sy 2. 22 dia mbola manamafy fa izay “manonona ny Anaran’ny Tompo” dia tsy maintsy miantso Azy “amin’ny fo madio”. Tsy azontsika atao ny mankeo anoloan’Ilay Mpamonjy Malalantsika, Izay sady Ilay Masina indrindra koa, miaraka amina fahalotoana sy fahotana tsy niekena. Ny mifanohitra amin’izany aza, ny fontsika manontolo dia tsy maintsy ara-dalàna eo imason’Andriamanitra —fa tsy ny vavantsika ihany.
Hisy fahatahorana masina an’Andriamanitra koa ao amin’ny fiangonana, aorian’ny nampiharana ny fifampifehezana, izay maneho ny fahamasinan’Andriamanitra manasazy ny ratsy (Asan’ny Apostoly 5. 11). Io fahatahorana io dia mifamatotra amin’ny fahatsapana ny fitiavan’ny Tompo sy ny zony, ka hiambina antsika tsy hanamaivana ny fahotana na hihevitra fa azo raisina ho tsy mahakasika ny fiangonana izany. Ny faharatsiana tsy notsaraina dia mandoto ny fiangonana manontolo: “ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra” (1 Korintiana 5. 6). Tsy maintsy nanaisotra “ny masirasira ela” ny Korintiana, mba ho tonga “vongana vaovao”.
Ny fahotako dia ampahafantarako an’ireo rehetra mahita ahy (Andriamanitra, ny devoly sy ireo anjeliny, ny mpino, ary izao tontolo izao) fa tsy miraharaha an’Andriamanitra aho. Manjary miharihary fa mihaino ny devoly aho, ary manome azy ny tenako manontolo mihitsy aza. Asehoko fa tsy iainako ny hoe ny hazofijalian’ny Tompo Jesoa dia efa nampisaraka ahy tanteraka tamin’izao tontolo izao (Galatiana 6. 14). Araka izany aho dia mitovy amin’ilay vahoakan’Andriamanitra taloha, izay nolazain’i Paoly ao amin’ny Romana 2. 24 hoe: “Ianareo no itenenana ratsy ny anaran’Andriamanitra any amin’ny jentilisa.”
Voalohany, tsy maintsy resy lahatra tanteraka ilay mpino fa sady naniratsira Ilay Andriamanitra masina indrindra, Izay tonga Rainy noho ny fahasoavana, no naniratsira koa Ilay Mpamonjy azy, Izay nanolotra ny tenany, hanafahany azy amin’izao miara-belona ratsy fanahy izao (Galatiana 1. 4). Avy amin’io faharesen-dahatra avy amin’ny Fanahy Masina ao aminy io no hisian’ny fanahy torotoro sy fo manetry tena, toy ny nahazo an’i Davida taorian’ny nijangajangany tamin’i Batseba (vakio ny Salamo 51). Ny fananana fo torotoro sy manetry tena dia tsy porofoina amina fanehoana hetsika tafahoatra mandritra ny fivoriana na eo amin’ny fanompoana, rehefa tafarina. Indrisy nefa fa izany matetika no hita, ary izany dia tsy inona fa fihetsiky ny nofo ihany, izay te haneho fa efa voalamina tanteraka ny zavatra rehetra. Tsia, ny mifanohitra amin’izany aza, ny fo toy izany dia miseho ao amin’ny fahanginana sy ny tomany ary ao amina fanetrentena hita maso izay tsy mitady hiala tsiny na hisehoseho.
Lafiny iray tena lehibe izany: ny fanompoantsika dia tsy mahafafa ny faniratsirana natao tamin’Ilay Andriamanitra masina indrindra, na ny voka-dratsy teo amin’ny hafa noho ny niainantsika tao amin’ny ota. Fieken-keloka an-kitsimpo ihany, marina sy feno eo anatrehan’io Andriamanitra io, no ahafahany mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra (1 Jaona 1. 9). Saingy mbola mitoetra ihany nefa ny voka-dratsy nihatra tamin’olon-kafa.
Tany amin’ny fiangonana tao Korinto, ilay mpijangajanga, nantsoina hoe “ilay mpanao ratsy”, dia nofaizina sy noroahina, nony farany (jereo 1 Korintiana 5). Ary vakiantsika ao amin’ny epistily faharoa ho an’ny Korintiana fa afaka nampirisika ny fiangonana ny apostoly Paoly, mba hamelany heloka sy hampifaliany azy, fandrao resin’ny fitomboan’alahelo izany olona izany (2 Korintiana 2. 5-11). Avy amin’io tsongandahatsoratra io, sy avy amin’ny toko 7, dia mivohitra mazava fa ilay olona niharan’ny fifampifehezana dia nody saina (Lioka 15. 17), ary efa niaiky ny fahotany; efa nisaona noho izany io olona io (ary ny fiangonana koa, noho ny hadisoany manokana). Feno alahelo tokoa io olona io, ary notandindomin-doza ho latsaka tao anaty alahelo diso lalina loatra. Izany no fo torotoro sy manetry tena! Angamba tsy tonga tao anaty herinandro iray izany, fa nila volana maromaro, izay ny apostoly vao afaka nanoratra tamin’ny fiangonana indray, mba hanehoan’izy ireo ny fitiavany, mba tsy ho tomany ihany no hiverenan’io olona io eo amin’ny Tompo, fa koa hiverina izy ka handray indray ny toerany eo anivon’ny rahalahiny.
“Dia hoy Davida tamin’i Natana: Efa nanota tamin’i Jehovah aho” (2 Samoela 12. 13). Avy eo izy dia niresaka mivantana tamin’Andriamanitra: “Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko” (Salamo 51. 4). Ny mampiavaka ny fibebahana dia ny fihetseham-po lalina, mahitsy ary mangirifiry, fa noho ny fahotantsika isika dia naniratsira an’Andriamanitra tenany mihitsy ary nanohintohina ny fahamasinany sy ny voninahiny. Tsy afaka ny hianina amin’ny fahatsiarovan-tena ivelany ho diso fotsiny isika. “Angamba tsy misy zavatra manamafy ny fo mihoatra noho ny fahazarana miaiky heloka nefa tsy mahatsapa ilay izy” (J. N. Darby). Tsy hanjary hanana toetra maivan-tsaina toy izany isika, raha mahatsiaro fa tsy maintsy nikapoka IIay Malalany sy nahafoy Azy teo amin’ny hazofijaliana Andriamanitra, noho ny fahotantsika. “Eo aminao no misy ny famelàn-keloka, mba hatahorana Anao” (Salamo 130. 4)
Araka an’i Erwin Luimes.
Navoaka tany Cameroun tao amin’ilay gazety boky hoe “Ianao, manarahy Ahy”, B.P. 98, Ebolowa – 2003